ZOMA 15 FEBROARY 2019
ONIVERSITEN’AMBONDRONA : Efa manomboka ny asa fanarenana
51 miliara Ariary ny tombana amin’ny fanarenana tanteraka ny simba amin’ny tranon’ny mpianatra ao Ambondrona. 9 février 2018
Natomboka ny alatsinainy teo io fanarenana io. Lamina iarahan’ny ministera sy ny oniversiten’i Mahajanga manatanteraka araka ny tondrozotra niarahan’ireo tompon’andraiki-panjakana natao tamin’ny faran’ny herinandro teo sy nampahafantarina tamin’ny haino aman-jery.
Efa samy manao ny asany ny orinasa sy ny oniversite ary ny ministera. Tsy maintsy atao io fanarenana io, hoy ny dokotera Robelson Rabiajean. Manampy mialoha ny fidiran’ny mpianatra amin’ny volana avril. Manampy araka izany azony atao ihany koa ny avy ao amin’ny oniversiten’i Mahajanga.
Bloc dimy ao anatin’ny efa-bolana no tratrarina ary ezahina amboarina ihany koa ireo tranon’ny mpianatra. Mampametra-panontaniana ny maro ihany ny mety ho vitan’ io volabe io raha toa ka ho azo daholo. Inoana fa ahafahana ihany koa manampy ny isan’ireo bloc fonenan’ny mpianatra satria dia vola be tokoa izany 51 miliara ariary na 255 miliara fmg.
Nifarana tamin’ny fifandonana ny fifampiarahabana nahatratra ny taona MPANAKANTON’I MAHAJANGA (160) 10 février 2019 Voasambotra omaly teny Antsahabe MBOLA RAJAONAH (96) 13 février 2019 Olona fito voasambotry ny mpitandro filaminana FANAFIHANA MITAM-BASY TETO MAHAJANGA (88) 12 février 2019 Mbola misy ny tsy matimanota miriaria RAHARAHA AMBOHIMAHAMASINA (85) 13 février 2019 Nahitana fatim-behivavy iray tsy misy tanana sy tongotra ANKARAOBATO ANKADILALAMPOTSY (84) 13 février 2019 Nigadona soa aman-tsara teto an-tanindrazana omaly FILOHA ANDRY RAJOELINA (82) 12 février 2019